ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တာဆီးကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အစီအမံများ | Myanma Port Authority
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဝင်ရောက်လာမည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်သင်္ဘောကြီးများကို ဆိပ်ကမ်းသို့မဝင်ရောက်မီ (၇၂)နာရီအလိုမှစ၍ (၄၈)နာရီ၊ (၂၄)နာရီ စသည်ဖြင့် သင်္ဘော ပေါ်တွင် ဖျားနာသူပါ/မပါအား မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာနသို့ email ဖြင့် ဆက်သွယ် သတင်းပေးပို့စေပါသည်။
ဆိပ်ကမ်းတံတားအသီးသီးသို့/မှ ဝင်ရောက်/ထွက်ခွာရာတွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ရေကြောင်းပြမှူးကြီးများအား PPE ဝတ်စုံပြည့်ဖြင့်သာ မောင်းနှင်စေပါသည်။
ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် သင်္ဘောကြီးများအား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းကျန်းမာရေးဌာနမှ ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးမှသာ ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်/ချလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် စေပါသည်။
ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့များ၊ တွန်းဆွဲသင်္ဘောနှင့် Pilot Boat များမှ ရေယာဉ်ဝန်ထမ်းများ၊ မြစ်ဝရှိ Fixed Pilot Station ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ တားဆီးကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လက်ဆေး စေခြင်း၊ Mask တပ်စေခြင်း၊ Social Distancing ကိုလိုက်နာစေခြင်း၊ လက်အိတ် နှင့် Face-shield များ ဝတ်ဆင်စေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်စေပါသည်။
အထူးသဖြင့် Fixed Pilot Station ဝန်ထမ်းများကို တစ်လတစ်ကြိမ် လဲလှယ်စေပြီး၊ အဖွဲ့သစ် ကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ နှာခေါင်းတို့ဖတ်ယူစစ်ဆေးပြီး၊ အောင်မြင်သူများကိုသာ သင်္ဘောဖြင့် ချက်ခြင်း စေလွှတ် လဲလှယ်စေပါသည်။
သင်္ဘောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း စာရွက်စာတမ်း ကိစ္စရပ်များအတွက် ယခင်ကကဲ့သို့ သင်္ဘောသားများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း မရှိ ဘဲ၊ စာရွက်စာတမ်းများအား သတ်မှတ်နေရာတွင်ထား၍ ပိုးသတ်ပြီး ရယူ/ပေးအပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်စေပါသည်။
ဆိပ်ကမ်းတံတားအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆိပ်ကမ်းဝန်ထမ်းများ၊ ကုန်ကိုင်တွယ်စက်ကရိယာမောင်းနှင်ကြသူများ၊ ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့/ ထုတ်ယူကြမည့် ကားသမားများ၊ အေးဂျင့်များကိုလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ တားဆီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လက်ဆေးစေခြင်း၊ Mask တပ် စေခြင်း၊ Social Distancing ကိုလိုက်နာစေခြင်း၊ လက်အိတ်နှင့် Face-shield များ ဝတ်ဆင် စေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်စေပါသည်။
ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား သင်္ဘောသားများကို အချိန်း/ အပြောင်းပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကော့သောင်းအနီး မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် Crew Change ပြုလုပ်ခြင်းကို ၃၀-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ ယနေ့အထိ စုစုပေါင်းသင်္ဘော(၆၀၈)စီးမှ Sign Off သင်္ဘောသား (၅၉၂၄)ဦးနှင့် Sign On သင်္ဘောသား (၅၇၅၆)ဦးကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဝင်ရောက်၍ ကုန်တင်/ချဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အောက်ဖော်ပြပါ သင်္ဘော (၄)စီးမှ သင်္ဘောသားအချို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရကြောင်းကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ရသည့်အတွက်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်၊ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှု များနှင့်အညီ Crew Change ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်-
MV. VANTAGE KEY Sign On (၂၂)ဦး၊ Sign Off (၂၀)ဦး (ဆူးလေ-၃၊ ရောက်ရှိ- ၁-၆-၂၀၂၁၊ ထွက်ခွာ- ၉-၇-၂၀၂၁)
MV. U THRAR Sign On (၂၃)ဦး၊ Sign Off (၂၃)ဦး (ဆူးလေ ၅-၇၊ ရောက်ရှိ- ၂၄-၆-၂၀၂၁၊ ကုန်တင်ဆဲ)
MV. MCL 12 Sign On (-)ဦး၊ Sign Off (၁၂)ဦး (ရောက်ရှိ- ၁၅-၇-၂၀၂၁၊ လိုအပ်သည့် သင်္ဘောသားအသစ် အင်အားပြည့် မရရှိသေးသဖြင့် ရွှေမဲဆိပ်ကမ်းတံတား တွင် ဆိုက်ကပ်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။)
MT. THERESA LIBRA Sign On (၂၀)ဦး၊ Sign Off (၂၃)ဦး၊ (၂၃ ဦးအနက် ၂ ဦးသေဆုံး၊ Wilmar ဆိပ်ကမ်း တံတား၊ ရောက်ရှိ- ၅-၈-၂၀၂၁၊ ထွက်ခွာ- ၇-၈-၂၀၂၁)